Okwu njikwa ahụike na ahụike | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Ahụike na Ahụike Franchises
Ahụike na Ahụike Egosipụta Mara Mma Franchises
Ahụike Ahụike na Ahụike kacha ọhụrụ
KNOCKOUT Returns Boutique mgbatị mgbatị ahụ maka ndị na - etinye ego na - arụ ala Prime Minister dị n'ofe UK - Nnukwu ego: imeghe 9Round ...
Soro na HITIO Gym Revolution nke HITIO Gym na-enye ndị na-achọ azụmahịa ha na-esote ihe pụrụ iche site na ijikọta ...
Onweghi ohere na njem ntụrụndụ & ntụrụndụ ahia dị ka inflatable Photobooth & Hamsterzorb azụmahịa nwere nnukwu uru na…
Ndi ohere TRIB3 Ndi otu ndi ozo no n'azu TRIB3 nwere ezigbo obi uto ime ka ndi mmadu gbakorita ha ka ha hu oru ha.
Fitnesslọ ọrụ ahụike na-emewanye ọnụ n'ụwa niile yana mmụba nke ọnụọgụ oke ibu na-eto ụwa niile na-ebuso nke a site n'inwe ndị otu mgbatị na ịrụ ọrụ n'akụkụ ụwa niile. Thelọ ọrụ ahụike mba ụwa ahụla ụdị uto dị ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga. Yabụ taa, anyị ga - edepụta ụfọdụ eziokwu n'akụkụ ụlọ ọrụ mgbatị ahụ na mba dị iche iche ka ị nwee ike nweta mmetụ maka nnukwu ụlọ ọrụ a nwere ike ịhụ uto n'ọdịnihu.
Statistics gburugburu ulo oru Health & Fitness.
Ugbu a, m ga-edepụta ọnụọgụ ole na ole mbụ anakọtara n'ọtụtụ mba iji gosipụta ụdị uto na chọrọ enwere maka azụmaahịa ahụike & ahụike n'ọtụtụ mpaghara n'ofe ụwa. Onu ogugu ndi a nwekwara ike ime ka ufodu ndi mmadu tinye aka na itinye aka na ulo oru a na - ato uto nke na egosiputa ngwa-ngwa ihe a choro ya na ndi ahia ya n’azu uwa nile.
Lọ ọrụ ahụike na US kwesịrị ijeri $ 30 Billion US.
Lọ ọrụ ahụike na US ahụwo nnukwu uto nke 4% n'ime afọ iri gara aga.
20% nke ndị okenye America nwere ndị otu mgbatị ma ọ bụ ndị otu klọb ahụike.
Ọnụ ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ mgbatị ahụ na Europe dum ruru euro euro 24 nde dị egwu na 2019.
Mba nke dị na Europe nke nyere aka kacha ukwuu n'ahịa ahịa ahụ na 2019 bụ Germany.
Lọ ọrụ ahụike na Germany mere ihe ruru euro 5.3 ijeri euro.
Know maara 300,000 ndị bi na UK sonyere mgbatị ahụ kwa afọ.
Ndị otu egwuregwu agbagoro elu ruru nde mmadụ atọ na UK n'etiti 3 rue 2010.
Ebe ọ bụ na 2010 ruo 2020 ụlọ ọrụ mgbatị ahụ amụbawo site na 33%.
Lọ ọrụ ahụike na-enyere UK aka ijikwa $ 5 ijeri kwa afọ.
Kedu ihe ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka ụlọ ọrụ Health & Fitness?
N'ozuzu ya, ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi ihe nnukwu ụlọ ọrụ na-ahụ maka mma bụ ọ bụghị naanị n'otu mba na-eme ya na mba ụwa. Ọzọkwa ụlọ ọrụ ahụ ike & ahụike na-ahụ ntolite kwa afọ 10. Nke na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ ike na ahụike amaalarịrị ma ọ ka nwere ọnọdụ na-aga n'ihu. Yabụ ọ bụrụ na ejighị n'aka na ịchọrọ itinye ego na ntanetị mma na nchekwube na nchekwube ndị a amụbaala n'ike mmụọ nsọ gị ma gosipụta n'ezie na mbara igwe bụ njedebe na ụlọ ọrụ ahụike.
Mmechi gburugburu &lọ Ọrụ Ahụike & Ahụike.
Na mmechi ụlọ ọrụ ahụike na ahụike na-egosi mmụba na-arịwanye elu nke afọ kwa afọ. Nke na-egosi ụdị azụmaahịa ahụike & ahụike bụ usoro azụmaahịa kwụsiri ike iso. Agụụ na-achọwanye ịrị elu karịa afọ ọ bụla na ụfọdụ ndị ọkachamara n'ihe metụtara ahụike & ahụike ekwuola na ha tụrụ anya na ọnụọgụ ndị a ga-amụba n'ime afọ 10-15 na-esote. Ebe ọ bụ na ihe a choro ga-abawanye elu na oke ibu na ọnụ ọgụgụ oke ibu ụmụaka ga-aba ụba. Na mkpokọta anyị nwere olile anya na ị mụtala ihe gbasara ahụike na ahụike zuru ụwa ọnụ site na ịgụta nke a taa, anyị na-atụkwa anya ka chi ọma gị na ọrụ ọdịnihu gị n'ime ngalaba ọrụ franchiseek site n'aka anyị niile na Franchiseek.